Marouane Fellaini oo ugu Dambeyn Afka Furtay iyadoo Heshiiskiisa United uu Dhacayo Asbuuca Dambe – Gool FM
Marouane Fellaini oo ugu Dambeyn Afka Furtay iyadoo Heshiiskiisa United uu Dhacayo Asbuuca Dambe
CR Shariif June 25, 2018
( Manchester ) 25 Juunyo 2018. Marouane Fellaini ayaa qarka u saaran in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku xaliyo mustaqbalkiisa iyadoo uu gabogabo yahay qandaraaskiisa kooxda Manchester United.
Laacibka qadka dhexe ee Belgium ayaa ku jira asbuucii u dambeyay ee heshiiska kooxda Old Trafford, sida ay warineyso majalada Manchester Evening News.
Fellaini wuxuu ahaa mid diiday inuu saxiixo qandaraas cusub bishii September wuxuuna noqon doonaa beeca xorta ah marka saacadu tahay 12 saqda dhexe ee habeenimada sabtida.
Jose Mourinho ayaa ku rajo weynaa in United ay sii heysato laacibkan reer Belgian laakiin Fellaini wuxuu u muuqadaa inuu isaga dhaqaaqo kooxda taa oo uu kamid ahaa shantii sano ee lasoo dhaafay, waxaana laga xiiseynaya horyaalka China, Turkey, iyo sido kale naadiyada AC Milan iyo Arsenal.
Mar wax laga weydiiyay xaalada heshiiskiisa United, Fellaini ayaa ku jawaabay: ” Waad ogaan doontaa sida ugu dhaqsiyaha badan.”
Mourinho ayaa ka walsanaa bishii April hadii United ay ku fashilmato sii heysashada Fellaini in uu doonayo la saxiixashada labada cayaariyahan oo qadka dhexaa marka uu furmo daaqada kala iibisaga.
” Waxaan dooneynaa inaan maalgashano si aan u hormarino aasaaska kooxdeena,” Mourinho ayaa sheegay kadib afar dhamaadkii koobka FA Cup-ka oo ay la cayaareen Tottenham.
“Waxaan u baahanahay inaan helno badalka Michael Carrick, hadii Marouane Fellaini uu baxo, waxaan haddana u baahanahay inaan helno badalka Marouane Fellaini.”
United ayaa buuxisay booska Carrick waxayna £52m oo gini kula soo wareegeen laacibka Brazil ee Fred iyadoo sido kale soo bandhigay xiisaha ay u qabaan xiddiga qadka dhexe kooxda Lazio ee Sergej Milinkovic-Savic iyo laacibka Roma Lorenzo Pellegrini.
Macalinka lala Xariirinayo Shaqada Chelsea ee Maurizio Sarri oo Hooy ka Dhigan Doona Xarunta Tababarka Kooxda.
Bayern Munich oo diiday Benzema iyo lacag si ay u fasaxdo Robert Lewandowski